ချီကာဂိုမြို.မှ ဆာရာဂိုးစတိန်း ဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီးသည် မိမိ မရောက်ဘူးတဲ့ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်သို. ခရီးထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ေ၇ာက်သောအခါ ဟိုတယ်တစ်ခုသို.၀င်တယ်။ဒီဟိုတယ်မှာ အချို.လူမျိုးကို လက်မခံသော ဟိုတယ်ဖြစ်တယ်။
ဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုမစ် ဂိုးလ်စတိန်းက ပြောတယ်။ " နှစ်ပတ်ကြာနေဖို့ ကျွန်မ အခန်းတစ်ခန်းလိုချင်တယ်။ "
မန်နေဂျာ က ပြန်ပြောတယ်။ '' ၀မ်းနည်းပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အခန်းလွတ်မရှိပါဘူး။
ထိုအချိန်တွင် ဧည့်သည်တယောက် အခန်းလာအပ်တာကိုတွေ.ရတော့ ၀မ်းသာအားရ ပြောတယ်။
" ကြည့်စမ်း.. အဆင်ပြေလိုက်တာ။ အခန်းတခန်း လွတ်သွားပြီလေ။ အဲဒီအခန်းကျွန်မကိုပေးလို.ရပြီပေါ.။ "
"ဒီလိုလွယ်လွယ် တွက်လို.မရဘူး။.. ကျွင်္နတော်တို.ဆီမှာ ဂျူးလူမျိုးတွေကို လက်မခံပါဘူး။ "
" ဘယ်သူလဲ ဂျူးလူမျိုး.. ကျွန်မလား..ကျွန်မ ကတ်သိုလစ် ဘာသာဝင်ရှင့် "
" ဒါကို ယုံကြည်ဖို. ခက်ပါတယ်။ မေးခွင်.ပြုပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ သားတော်ဟာဘယ်သူပါလဲ။ "
" မယ်တော် မေရီ ကမွေးတဲ့ ယေရှု သခင်ပေါ့ရှင်. ..."
" သူ. ကိုဘယ်မှာမွေးတာလဲ။ "
" နွားတင်းကုတ်မှာ "
" ဘာဖြစ်လို. နွားတင်းကုတ်မှာမွေးရတာလဲ ...။"
" နင်တို.လို အကောင်မျိုးတွေကြောင့် မယ်တော် မေရီ အခန်းငှားမရလို.တဲ့ဟေ...။